किन चाहिन्छ क्याल्सियम ? – Health Post Nepal
२०७५ मंसिर ६ गते ९:४६
कान्ति बाल अस्पतालमा विपन्नलाई आकस्मिक उपचार निःशुल्क
भिटामिन डी र क्याल्सियमको एक–आपसमा अन्तरसम्बन्धित छन् । त्यसैले भिटामिन डी र क्याल्सियम सँगसँगै हुनु आवश्यक छ ।
क्याल्सियमको मात्रा कम भएमा सानो छँदा बच्चाको वृद्धि विकास कम हुने गर्छ । बच्चा त्यति सक्रिय नदेखिने, सानोतिनो चोटपटकका कारण पनि फ्याक्चरको समस्या आउनेलगायत समस्या देखापर्छन् । ठूलो भएपछि क्याल्सियमको मात्रा कम भएका ओस्टेमालासिया नामक रोग देखापर्ने गर्छ । साथै, क्याल्सियमको मात्रा शरीरमा कम भएका मानिसमा समकक्षीको तुलनामा छोटो समयमै थकित हुनेजस्ता समस्या देखापर्छन् । शारीरिक अस्वस्थताका कारण स्मरणशक्तिमा समेत कमी आउँछ । कतिपय बच्चामा क्याल्सियमको कमीले छारेरोगको समस्या पनि देखापर्न सक्छ ।
(डा. शर्मा कान्ति बाल अस्पतालमा पोषणविद्का रुपमा कार्यरत छन्)
Tags: कान्ति बाल अस्पताल, डा. कमलराज शर्मा
पछिल्लो २४ घन्टामा ३ हजार १ सय ४० जना संक्रमणमुक्त